July 7, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha July 7, 2020
(Milano) 07 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa guul weyn oo ay u qalantay ka gaartay Juventus oo marti u ahayd, isla markaana la horreysay labo gool, kulan lix gool la iska dhaliyey qeybta labaad ee ciyaarta. Kulankan ayaa qeybtii hore la isku mari waayey, waxaana lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0 […]Sii akhriso
(London) 07 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa barbaro 1-1 la gashay naadiga Leicester oo marti u ahayd, xilli Gunners kaarka cas laga qaatay kulankan. Ciyaartan oo qeyb ka ahayd horyaalka Premier League ayay Arsenal kooxda Leicester City ku soo dhoweysay garoonkeeda, iyadoo goor dambe uu shabaqa gaaray Vardy. Arsenal ayaa goolka la horreysay […]Sii akhriso
Dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay guulahah mid ah halbeegyadad caalamiga ah
Soomaaliya July 7, 2020
Muqdisho(SONNA) Soomaaliya oo xaqiijisay mid ka mid ah halbeegyada caalamiga ah ee loogu tala galay Maareynta Musiibooyinka. Dowladda Soomaaliya ayaa horumar ballaaran ka sameysay xaqiijinta himilooyinka ku dhIgan hannaan howleedka loo yaqaan SENDAI (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction). Si loo yareeyo khataraha musiibooyinka dalka ka dhaca, loona badbaadiyo naf Sii akhriso
Ethiopia’s bloody mayhem – The Hindu
Ethiopia News July 7, 2020
Ethiopia’s bloody mayhem The HinduSii akhriso
(Milano) 07 Luulyo 2020. Shaxda rasmiga ah kulanka adag ee kooxda AC Milan iyo Juventus ayaa la shaaciyey, iyadoo xiddigo waa weyn ay ku soo bilowdeen. Zlatan Ibrahimovic, Lucas Paqueta iyo Ante Rebic ayaa ku soo bilowday safka hore ee kooxda AC Milan, halka Juventus ay ku soo bilowday Ronaldo, Gonzalo Higuain iyo Daniele Rugani, […]Sii akhriso
(London) 07 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa soo gashay kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League kaddib markii guul ay ku dhibtootay ay ka soo qaadatay Crystal Palace oo ay booqatay kulan shan gool la iska dhaliyey. Chelsea oo marti ahayd ayaa goolasha la horreysay, waxaana goolka daafurka ah u dhaliyey 6’daqiiqo Olivier Giroud, kaddib […]Sii akhriso
(London) 07 Luulyo 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah ee ay garoonka ku soo geli doonaan caawa Kooxaha Arsenal iyo Leicester City. Gunners ayaa garoonkeeda Emirates ku soo dhoweynaysa naadiga Leicester, iyadoo labada weeraryahan ee kooxahan, Aubameyang iyo Vardy ay ku tartamayaan caawa gooldhalinta horyaalka Premier League. SAFAFKA LABADA Sii akhriso
Madaxweynaha Hirshabeelle oo Beledweyne kula kulmay odayaasha dhaqanka “Sawirro”
Muqdisho (SONNA)- Madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta magaaladda Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan kula kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka jawiil, isagoo kala hadlayay dar-dar galinta arrimaha Dib u heshiisiinta ka socota Gobolka Hiiraan, iyo in odayaasha iyo waxgaradka ay ka shaqeeyaan xoojinta Nabadda iyo Dib u Sii akhriso
(London) 07 Luulyo 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah ee ay garoonka ku soo geli doonaan caawa Kooxaha Crystal Palace iyo Chelsea ee London Derby. The Blues ayaa booqanaysa garoonka Selhurst Park, halkaasoo kulan ka tirsan horyaalka Premier League ay kula soo ciyaari doonaan Palace. SAFAFKA LABADA KOOXOOD OO DHAMMAYSTIRAN HOOS KA EEG:- Crystal […]Sii akhriso
Muqdisho (SONNA)- Guddoomiyaha aqalka sare oo soo jeediyay in shuruucda golaha shacabka ansixiyey la soo marsiiyo aqalka sare sida uu qabo dastuurka,kaddib warsaxaafadeed kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Sii akhriso